Gabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’ |
Home Afaan Oromoo Gabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’
Gabaasa ‘OSG’: ‘Ji’oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman’
(BBC Afaan Oromoo) — Ji’oota jahan darban Oromoonni 64 akka malee ajjeefaman, 1400 ol kan ta’an ammoo akkanumaan qabamanii hidhamaniiru jedha gabaasni dhaabbata mirga namoomaa ‘Oromia Support Group’ baase.
Gabaasi kun ajjeechaa akka malee loltoonni mootummaa Oromoota irratti raawwatan dabalatee sarbama mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaa ammaa jalatti baatii Waxabajjii bara 2019 irraa eegalee raawwatame of keessaa qaba.
Gabaasni fuula 24 qabu mata-duree ‘Human Rights Abuses in Ethiopia: return to 1992‘ jedhu kun maqaa namoota ajjeefamanii, bakka itti ajjeefaman suuraa isaanii waliin, kan warra hidhamaniis akkasuma of keessaa qaba.
Akka gabaasichi jedhutti sarbamni mirga namoomaa kun kan irratti raawwatame hedduun isaanii miseensotaafi deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) yoo ta’an kan raawwate ammoo qaama nageenyaa mootummaati.
Mootummaan Itoophiyaa loltoonni isaa nageenya ummataa eeguuf malee mirga ummataa sarbuuf kan hin bobbaane ta’uu himuun, sarbamni mirga namoomaa loltoonni raawwatan akka hin jirre yeroo adda addaa himaa tureera.
Odeeffannoo dabalataaf kunneenis jiru:
Dargaggoon suuraan isaa qoodamaa ture eenyu?
Barattootni Oromoo yunvarsiitiilee naannoo Amaaraa irraa bahan laga Xaafoo buufachuu himu
Waa’ee Laggasaa Wagii kana beektuu?
Hidhaafi ajjeechaa bakka gara garaatti raawwatamu irrattis qorannoon raawwatamaa jiraachuudha kan aanga’oonni mootummaa himan.
“Kan bara 1992 ture caala hammaataadha”
Sarbamni mirga namoomaa wayita ammaa Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru, kan bara 1992 raawwatamaa tureen wal fakkaata jechuun barreessaan gabaasichaafi dura taa’aan ‘Oromia Support Group’ Dr Tireevar Tiruumaan BBC’tti himaniiru.
“Humnoonni nageenyaa Itoophiyaa lubbuu namaaf gatii kennuu dhabuun, argannoo gabaasa kanaa baay’ee na dinqisiisedha,” jedhu.
“Godinaalee Wallaggaafi Gujii keessatti loltoonni mana jireenyaa, iddoo hojiifi karaa irratti callisaniituma nama ajjeesu,” jedhu Dr Tirumaan.
Kun yakka bara 1991/92 raawwatamaa turerra kan hammaatudhas jedhu.
Sarbamni mirga namoomaa akka kanaa jaarraa 21ffaa keessatti raawwatamaa jiraachuun isaa ‘rifaasisaadha’ jedhan.
“Daranuu kan rifaasisaa taasisu ammoo wayita MM Abiy Noobeelii Nagaa badhaafamanitti raawwatamaa jiraachuu isaati,” jedhu.
Gabaasichi akkamiin barraa’e?
Gabaasa kana kan barreessan Dr. Tireevar Tiruumaan bara 1991 irraa eegalee gabaasaalee sarbama mirga namoomaa akka kanaa hojjechaa turuu isaanii BBC’tti himan.
Wayita BBC’n dubbisetti Ingilaand magaalaa Landan kan turan Dr Tiruumaan, odeeffannoowwan kanneen gabaasaan dhaabbata ‘Oromia Support Group’ walitti qabaa akka ture, akkasumas dhaabbata mirga namoomaa biyya Awustiraaliyaa jiru ‘Gadadoo’ jedhamurraa fudhachuu dubbatu.
Odeeffannoowwan marsaalee hawaasaa irratti bahan mirkaneessuufi gabaasaalee miidiyaafi dhaabbilee mirga namoomaa kaan akka galteetti fayyadamuus himu.
Gabaasichi hagam loogii irraa bilisa akka ta’e gaafatamanii “ani waan dhugaa hin taane hin barreessu, loogiirraa bilisa ta’uu koo garuu namni kaan osoo ilaalee mirkaneessee wayya,” jedhan.
Argannoon gabaasichaa maali?
Gabaasichi ajjeechaafi hidhaa hin malle raawwatame jedhe kan Finfinneefi Jiddugaleessa Oromiyaa, Naannoo Amaaraa, Baha Oromiyaa, Lixa Oromiyaafi Kibba Oromiyaatti raawwate jedhe bakka shanitti qoodee baase.
Barataa Waggaa lammataa Yunivarsiitii Amboo kan ta’e Iskindir Tsaggaa Waxabajjii 13 loltoota mootummaan ajjeefame, Ashabbir Abdullaahii Godina Arsii, Aanaa Calleetti Waxabajjii 19 kan ajjeefame warreen Jiddugaleessa Oromiyaa keessatti ajjeefaman jedhaman keessaa kan maqaan eeramedha.
Naannoo Amaraatti barattoota Oromoo Yunivarsiitii keessatti ajjeefamaniifi Lixaafi Kibba Oromiyaatti manaa baafamanii ajjeefamanii kan gataman jedhes gabaasichi maqaafi garii suuraa isaanii waliin maxxanseera.
Lakkoofsi Oromoota walumaagalatti ajjeefamanii kan gabaasicha keessatti eeraman 64.
Dabalataan barreessitoota, barattoota, namoota siyaasaa, akkasumas daldaltoota bakkeewwan adda addaatti hidhaman jedhe 1,400 ta’anis tarreesseera.
Haata’u malee, namoonni hidhaman jedhamanii gabaasicha keessatti eeraman tokko tokko kan gadi dhiifaman ta’uu BBC’n hubateera.
Dhimma kanarratti gaafatamanii, “namoonni hidhamuu isaanii malee gadi dhiifamuu isaanii gabaasni nan gahu, haa ta’uutii namoonni gadi dhiifamanillee hidhamaa jiraachuu isaanii gabaasuun dogoggora hin qabu,” jedhan.
“Badhaasa Noobeeliitti qoosuudha”
Hawaasni idil-addunyaa waa’ee yakkawwan raawwatamaa jiran kanaa callisuu hin qabu jedhu barreessaan gabaasichaa.
Hanga mootummaarra qoqqobbii kaa’uutti adeemuu qaba jedhu.
Loltuun guyyaa saafaa karaa irratti rasaasaan nama ajjeesu yookin reebee nama ajjeesu akkanumatti ilaalamuu hin qabus jedhu.
Kuni hundi osoo ta’aa jiru MM Abiy Noobeelii Nagaa badhaafamuun “badhaasa Noobeeliitti qoosuudha” jedhu Dr Tiruuman.
Ajjeechaan Wallaggaafi Gujiitti raawwatamu, akkasumas kan barattoota Oromoo irratti yunivarsiitota naannoo Amaaraatti raawwatamaa jiru xiyyeeffannoo addaa barbaadas jedhu.
Ajjechaa namoota nagaarratti Lixa Oromiyaatti yeroo gara garaatti raawwatame jedhame yeroo gabaasa turretti Komishiniin Poolisii Oromiyaa dabalatee aanga’oonni mootummaa bakka rakkoon itti uumaman yeroo dubbatan, gocha raawate balaaleffatanii qorannoon seeraaf dhiyeessina kan jedhudha.
Raayyaan Ittisa Biyyaa ummata tiksa malee hin dararu
Gaaffii ummanni irra deddeebiyuudhaan rasaasa lamaan du’aa jirra (kan qaama hidhatee bosona jiruufi kan raayyaa humna ittisaa) jedhuuf Ajajaa Ittaanaa Walii Galaa Humna Waraanaa Itoophiyaa Janaraal Birhaanuu Julaa ammoo raayyaan ittisa biyyaa nageenyummaa uummataa mirkaneessuuf hojjeta malee uumata nagaa badiisaa malee darara kan jedhu oduu dharaati jedhan.
“Raayyaan Ittis Biyyaa ummata tiksa malee hin dararu,” jechuun dubbatan.
Warreen nagaa booressan, olaantummaa seeraa cabsanirratti tarkaanfii fudhachuun irraa kan hafe Raayyaan Ittisa Biyyaa umatarraan rakkoo qaqqabsiiseera yoo ta’ellee innis itti gaafatama, jedhanii turan Janaraal Birhaanuun.
“Akka jedhamutti, raayyaan gadi ba’ee ummata nagaa karaasaa deemu, kan kaayyoo gara biraa hin qabnerratti tarkaanfii fudhata jedhee gonkumaa amanuu hin danda’u,” jedhan.
Naannoo tokkotti qaamoleen tokko tokko riphanii yoo raayyaa Ittisa Biyyarratti dhukaasa banan, raayyaan ittisa biyyaa ofirraa ittisuuf wayita rasaasa dhukaasu namni kamiiyyuu miidhamuu hin danda’u jedhee waadaa hin galu, jedhan Janaraal Birhaanuun.
Waa’ee ajjeechaa aanga’oota mootummaa irratti keessumaa Wallaggatti raawwataa jiruu gabaasichi waan jedhe hin qabu.
BBC’n gabaasa kanarratti Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaafi qaamoleen mootummaa kaan dhimmichi isaan ilaallatu deebii akka kennan yaaliin taasise hin milkoofne.
Previous articleDhaabini Dhaabbii Hin Qabne faayidaa Hin Qabu
Next article‘waa’ee Finfinnee furmaata ijibbaataa kennuuf hojjenna’-obbo Dawuud Ibsaa